प्रधानमन्त्रीले हठ होइन, बिनम्रता देखाउनु पर्छ– भट्टराई
रोल्पा अनलाइन Wednesday, July 25, 2018
बुटवल, साउन ९ । परराष्ट्रबिद तथा पूर्व प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार डा. दिनेश भट्टराईले सरकारलाइ हठ छाडेर बिनम्रता देखाउन आग्रह गरेका छन् । आफुलाइ यातना दिएर सत्यको आग्रह दिने डा गोबिन्द केसीको माग जनताकै भएको उनले बताए । तत्कालिन कोइराला सरकारले आबश्यक ठानेरै माथेमा टोलीलाई प्रतिबेदन बनाउन....
कपिल ज्ञवाली Friday, July 20, 2018
बुटवल, साउन ४ । पूर्व खानेपानी राज्यमन्त्री अब्दुल रज्जाकले ओली नेतृत्वको सरकार समाजबाद भन्दै उल्टोबाटोमा हिडेको टीप्पणी गरेका छन् । जनताको भाबना र मर्म बिपरित अघि बढेको सरकारको पछिल्ला गतिबिधि दुखदायी भएको भन्दै गलत रबैयाले सरकारले आफ्नै आयु घटाएको जिकिर गरे । रिपोर्टर्स क्लव प्रदेश ५....
डाक्टरले हप्काएपछि प्रशासनमा उजुरी
रोल्पा अनलाइन Thursday, July 5, 2018
प्यूठान, असार २१ । प्यूठान अस्पतालका निमित्त मेडिकल सपुरीटेन्डेन्ट डा. अच्यूतराज कार्कीले विरामीलाई चेकजाँच नगरी ‘हप्काएर’ पठाएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दर्ता भएको छ । झिमरुक गाउँपालिका–५ ओखरकोट मच्छिकी जुना न्यौपानेले मंगलवार आफूलाई अभद्र व्यवहार गरेको गुनासो गरेकी हुन् । ‘दुई घण्टा कुरेर डाक्टरलाई....
नेपालको जग्गा दलालको कब्जामा-कृषिमन्त्री
तेजेन्द्र केसी Wednesday, June 6, 2018
बुटवल, जेठ २३ । कृषि मन्त्री चक्रपाणी खनाल बलदेबले नेपालको जग्गाजति दलालको हातमा रहको खुलासा गरेका छन् । देशभरका जग्गाहरु न ब्यक्ति न त सरकारको भन्दै उनले दलालको मनपरिले जमिन ध्वस्त भएको दाबि गरे । रिपोर्टर्स क्लव नेपाल ५ नम्बर प्रदेशले बुटवलमा आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै....
उपेन्द्र लामिछाने Monday, January 22, 2018
रोल्पा थबाङका हरि बुढामगरलाई बाल्यकालदेखि नै घरअघिको हिमालले लोभ्याउँथ्यो । त्यही लोभले उनमा सगरमाथा चढ्ने चाहना पलायो । १९ वर्षको उमेरमा ब्रिटिस गोर्खा सेनामा भर्ती भएका उनले विभिन्न देशमा युद्धमा खटिने क्रममा ३२ वर्षको उमेरमा दुवै खुट्टा गुमाए । सन् २०१० मा अफगानिस्तानमा विद्युतीय धरापमा....
कांग्रेसलाई जुरुक्कै उचाल्ने बिमलको नयाँ गीत (भिडियो सहित)
रोल्पा अनलाइन Thursday, November 23, 2017
काठमाडौं। नानि देखि कांग्रेस कांग्रेस भानिराको बानि आँखा चिम्म गर्यो भने रुखमा याद जानी नेपाली गीत संगीतका हस्तिहरुकै सहकार्यतामा अर्को उत्कृष्ट काँग्रेस चुनावी गीत “सुन सुन साथी”बजारमा आएको छ । चर्चित सर्जक एकनारायण भण्डारीको उत्कृष्ट लय तथा शब्द सृजनामा बजारमा आएको गीतमा बहुचर्चित गायक तथा....
प्रधानमन्त्री देउवा रोल्पा आउदैं
पहलमान घर्ती Tuesday, November 21, 2017
रोल्पा, मंसिर ५ । नेपाली काँग्रेसका सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बिहिवार रोल्पा आउनुहुने भएको छ । नेपाली काँग्रेस रोल्पाको आयोजनामा सदरमुकाम लिबाङमा हुन गइरहेको बिशाल चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री देउवा रोल्पा आउनुहुने नेपाली काँग्रेस रोल्पाले जनाएको छ । सिंचाई राज्यमन्त्री समेत रहनुभएका नेपाली....
प्रकाश दाहालः जसले आफैं फेसबुकको फोटो ‘ब्ल्याक एण्ड ह्वाइट’ बनाए
अनलाइनखबर Sunday, November 19, 2017
३ मंसिर, काठमाडौं । प्रचण्डपुत्र प्रकाश दाहालले अब कहिल्यै फेसबुक चलाउने छैनन् । प्रकाशको फेसबुकमा रहेको प्रोफाइल तस्वीरसमेत ‘ब्ल्याक एण्ड ह्वाइट’ बनिसकेको छ । संयोग पनि कस्तो ! मृत्युपूर्व अगाडि नै प्रकाश दाहाल आफैंले रंगीन ‘प्रोफाइल पिक्चर’ हटाएर फेसबुकमा ‘ब्ल्याक एण्ड ह्वाइट’ तस्वीर राख्न भ्याएका....
प्रकाशको शरीरमा चोट, मृत अवस्थामा पुर्‍याइएको थियो अस्पताल
काठमाडौं। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डका छोरा प्रकाश दाहालको हृदयघातका कारण निधन भएको बताइएपनि उनको शरीरमा लागेको चोटका कारण निधन भएको आशंका चिकित्सकहरुले गरेका छन्। थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालमा उपचारका लागि ल्याइएका प्रकाशको शरीरमा भेटिएको चोटका कारण उनको निधन भएको हुन सक्ने उनको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ।....
काठमाडौं- माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका पुत्र प्रकाश दाहालको हृदयघातबाट निधन भएको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ। बिहान घरमा अचेत अवस्थामा भेटिएका दाहाललाई तत्काल नर्भिक अस्पताल लगिएको थियो। अस्पतालमा पुर्‍याउँदा उनलाई हृदयघात भएपछि गरिने क्याथल्याब प्रोसेसमै लैजान नपाएको अस्पतालका एक चिकित्सकले जनाएका छन्। चिकित्सकका अनुसार प्रकाशको....